शरणार्थी र आप्रवासी परिवार को लागि सार्वजनिक विद्यालय सूचना | USAHello
अमेरिका मा हरेक राज्य मा, छोराछोरीलाई शिक्षा एउटा सही छ. सार्वजनिक विद्यालय निःशुल्क विद्यालय सबै नागरिक र गैर-नागरिक छोराछोरीलाई उपलब्ध छ. संयुक्त राज्य अमेरिका मा सार्वजनिक विद्यालय र विद्यालय को अन्य प्रकार बारे जान्नुहोस्.
स्कूल सिस्टम र विभिन्न प्रकारका र विद्यालय को स्तर पढ्न. कसरी स्कूल छोराछोरीलाई दर्ता गर्न सिक्न र तिनीहरूलाई राम्ररी गर्न मद्दत. सार्वजनिक विद्यालय मा काम गर्ने मान्छे भेट्न. तिनीहरूले के बुझ्न र तिनीहरूले आफ्नो बच्चा कसरी मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ.
अमेरिकी शिक्षा व्यवस्था र अधिकार के हो?
शिक्षा व्यवस्था सबैलाई निःशुल्क शिक्षा एउटा सही छ भन्छन्. विद्यार्थी एक hijab लगाउने र प्रार्थना गर्ने अधिकार छ. तपाईं आफ्नो छोराछोरीको स्कूल कुरा गर्दा तपाईं व्याख्याकारों एउटा सही छ. संयुक्त राज्य अमेरिका र आफ्नो शिक्षा अधिकार मा शिक्षा व्यवस्था बारे जान्नुहोस्.
अमेरिकामा, सार्वजनिक विद्यालय उमेर बीच सुरु4र6जबसम्म जारी 16 गर्न 18 वर्ष पूरानो. तर तपाईंले प्रारम्भिक उमेर मा पूर्व-विद्यालय छोराछोरीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ. विद्यालयको विभिन्न स्तर बारे जान्नुहोस्. विद्यालय स्थापन पढ्न.
म स्कूलमा मेरो बच्चा कसरी दर्ता गर्छन्?
संयुक्त राज्य अमेरिका मा स्कूल आफ्नो बच्चा सुरु गर्न तपाईँले पहिले विद्यार्थी आफ्नो बच्चा दर्ता हुनुपर्छ. यो त स्कूल आफ्नो बच्चा स्वीकार गर्न सक्छन् स्कूल कागजात भ्रमण र साइन इन गर्न आवश्यक अर्थ. सिक्न आफ्नो बच्चा कसरी स्वीकार छ बारे र के कागजात आवश्यक. बारेमा स्कूल खाना र विद्यालय आवश्यकताहरु पढ्नुहोस्. के सिक्न आफ्नो बच्चा अनुपस्थित छ र कसरी स्कूल प्राप्त गर्न भने.
धेरै मानिसहरू अमेरिकी स्कूलमा काम. त्यहाँ शिक्षकहरू छन्, को पाठ्यक्रम, तर त्यहाँ त्यहाँ आफ्नो बच्चा मदत छन् पनि अन्य मानिसहरू हुन्. मानिसहरूलाई केही बारेमा जान्न तपाईं आफ्नो बच्चाको स्कूलमा भेट्न हुनेछ.
के गतिविधिहरु मेरो बच्चा स्कूलमा गर्न सक्नुहुन्छ?
संयुक्त राज्य अमेरिका मा विद्यालय पाठ प्रदान बढि. विद्यालय र अन्य संगठनहरू अन्य ठूलो अवसर प्रदान, यस्तो क्षेत्र यात्राको रूपमा, बाहिर गतिविधिहरु, घटनाहरू, कार्यक्रम-स्कूल पछि, र गर्मी शिविरमा. आफ्नो बच्चा स्कूल गतिविधिमा भाग कसरी मदत गर्न पत्ता.
स्कूलमा म कसरी मेरो बच्चा मदत गर्न सक्छ?
मेरो बच्चा सार्वजनिक विद्यालय जान छैनन्?
बच्चाहरु संयुक्त राज्य अमेरिका मा स्कूल जाने गर्नुपर्छ. तपाईं स्कूल छोराछोरीलाई पठाउन भने, तपाईं समस्यामा प्राप्त गर्न सक्छन्.
तपाईं स्कूल कस्तो आफ्नो बच्चाहरु पठाउन चयन गर्न सक्नुहुन्छ. यो निःशुल्क छ किनभने सबैभन्दा छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा जाने.
स्कूल त्यहाँ अन्य प्रकार छन्?
अमेरिकामा, त्यहाँ सार्वजनिक विद्यालय सट्टा छोराछोरीलाई शिक्षित अन्य तरिकाहरू छन्.
त्यहाँ विद्यार्थीहरूले धाउन तिर्न पर्छ भनेर निजी विद्यालय छन्. धेरै निजी विद्यालय चर्च वा धार्मिक संगठनहरूले व्यवस्थित छन्. प्रत्येक निजी विद्यालय लागत फरक छ. केही धेरै महंगा छन्. तर केही तिनीहरू परिवारलाई निजी विद्यालय भुक्तानी गर्न पर्याप्त पैसा छैन भने बच्चाहरु विद्यालय जाने मदत गर्न छात्रवृत्ति छ. निजी विद्यालय अक्सर सार्वजनिक विद्यालय भन्दा फरक नियम छ.
स्कूल को अर्को प्रकार एउटा चार्टर स्कूल छ. चार्टर स्कूल मुक्त छन्. चार्टर स्कूल परम्परागत सार्वजनिक विद्यालय जस्तै शैक्षिक र कानुनी आवश्यकताहरू पूरा, तर तिनीहरूले सार्वजनिक विद्यालय भन्दा फरक संचालक छ, जो सरकार द्वारा संचालित छन्. चार्टर स्कूल सार्वजनिक विद्यालय पालना गर्नुपर्छ भन्ने केही सबै नियम पालना छैन. आफ्नो बच्चा भर्ना लागू गर्न आवश्यक हुनेछ, र धेरै चार्टर स्कूल एक प्रतीक्षा सूची छ.
घर शिक्षा शिक्षा अर्को विधि हो. घर-schooled विद्यार्थी आमाबाबुको सिकाउनुभएको छन्. त्यहाँ घर शिक्षा बारे हरेक राज्य मा नियमहरू छन्. अभिभावक घर शिक्षा को लागि राज्य गरेको नियम थाह लागि र नियमहरू अनुसरण गर्दै पक्का लागि जिम्मेवार छ.